A Workout kuti Rinogara — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Panoperera nechimwe chiitiko apo nokukunda Vamhanyi akamira pamusoro Kumukundi wacho podiums, pamwe kunyemwerera pasi nezviso zvavo uye Medals patambo zvipfuva zvavo, vakanga vachicheka zvinobatsira avo kurovedza. Asi maererano neBhaibheri, pane mukuru orudzi kudzidzisa-kwete nokuti kurovedza muviri maturo, asi nekuti zviri zvishoma.
Kana wakambotamba nokusingaperi akanetseka Mwari anofunga pamusoro vanga vaneta dzenyu, pano Ndiyo mhinduro: Anofunga kuti ane zvinobatsira, asi zvishoma, ukoshi. Saka paunenge vachimhanya, kuita drills, uye nokusimudza masimbi, zororo mukuziva kuti chinhu chakanaka kuita. Kudzora muviri wako zvakanaka chimiro kunorumbidzwa-kunyange vakachenjera-asi zviri chete paichamuwanira imi saka kure.
Zvanzi mupositora Pauro akati kuna Timoti:
"Asi chinhu chokuita kwokusaremekedza uye mano nengano. panzvimbo, uzvirovedzere nepauMwari, chokudzidzisa muviri une shoma vanobatsirwa, asi uMwari hunobatsira pazvinhu zvose, sezvo hune vimbiso kune zvose muupenyu varipo uyewo upenyu kuuya." (1 Timothy 4:7-8)
Taigona pfupikisa pfungwa yaPauro achishanda kunze sezvizvi: Kurovedza muviri wakanaka, asi zvokunamata zviri nani. Uye izvozvo nokuti simba muviri pfupi, apo umwari husingaperi. Apo Pauro unotaura pamusoro po "kudzidzisa paumwari" Ndinofunga kuti zvinoreva kuita zvinhu kuti iwe akasimba mumudzimu. Zvinoreva kuita zvinhu izvo kuti imi kupfuura kuzvipira. Pamwe nokusimudza Bhaibheri wedu kunyange zvishoma chinodiwa pane nokusimudza ane uremu, asi kuregeredza zvinoreva tinorasikirwa kupfuura utano hwakanaka.
Nokusingaperi urinani Moment
Tose tinoziva kuti kana chinhu chinogara kwenguva refu zviri kutsanangurwa. Hakuna munhu uchatenga motokari achiziva richafa kuputsa zvinotevera mwedzi. Taizorega nani kutenga chinhu kunotora kwechinguva, nekuti tisimuke zvakawanda inivhesitimendi. Asi kana tiri saka akaverenga zvisarudzo pamusoro motokari, zvikuru sei akaverenga tinofanira kuva pamusoro mweya yedu?
Kangani Unofunga pamusoro wako isingagumi? Chokwadi, tinofanira kufunga nezvacho kupfuura zvatinoita. Hapana mubvunzo kuti tose zvedu vachararama nokusingaperi; mubvunzo ndiko kuti nokusingaperi vachafanana. Saka tinofanira kuita upfumi zvino, muchiziva kuti migumisiro hahungatongogumi.
Izvi zvinofanira nechirongwa zvatinenge kutarisa zuva nezuva. Sports zvakanaka, asi havasi zvose. simba renyu kwokunze kukupinza kukoreji, asi hazvingaswederi kukupinza Heaven. Unofanira kutarisira muviri wako zvakanaka, asi tine chinhu dzakakomba yokutarisira. How hwakanaka mweya yenyu?
How To Dzidzisai
Mwari inoita kuti tikwanise kuvaka "tsandanyama yomudzimu" kana tikarega kuenda chivi uye anofarirwa vakabata Jesu. Uye ipapo isu anotumira kuti yokurovedza muviri. Ari nenyasha akatipa shoko rake, vanhu vake, uye kunyange nzeve yake. Saka ngativerengei, ruwadzano, uye munyengetere. Vatambi vanorovedza zvakaoma nokuti vanoda kugadzirira mutambo kana machisi mberi kwavo. Vanoda kukwanisa kukwikwidzana pane mukuru pamwero.
Tose nemiedzo pakunamata, miedzo, uye hondo zuva nezuva. Uri kugadzirira? Tikapapfuura hakushandi vatambi uye hazvishandi kuvaKristu. Kuverenga Bhaibheri gore rapera hazvina kukwana kukutsigira gore rino. Tichatevera chete kuti kuburikidza yedaro refu ichi nenyasha dzaMwari, asi iye isu anogadzirira rudzi kuburikidza yedu yomudzimu muviri.
Zviri zvinobatsira kwandiri kuyeuka kuti kunyange zvakanakira kurovedza muviri havabvumirwi, zvakanakira zvokunamata vane risingagumi. On mazuva iwayo kana Handisi sokuti kunyengetera kana kuverenga Shoko raMwari, Ndinogona kuzviyeuchidza kuti abatsire hakusi duku kana kwenguva pfupi. Hazvizochengetwi chete ndibatsirei svondo rinouya, izvozvo achandibatsira inotevera upenyu. Ndizvo zvose nokukurudzirwa zvandinoda.
Theodora • Kurume 11, 2014 pa 10:40 ndiri • pindura
Izvi zvechokwadi akandikomborera…!!!Wazviita!!& Mwari vakukomborere….Ndinokutendai nokuti kubvumira Jehovha kuti kukushandisa.
Matt Smethurst • Kurume 11, 2014 pa 10:42 ndiri • pindura
Ndinotenda shoko iri rakanaka, rwendo.
Daniel DryIce Reyes • Kurume 11, 2014 pa 10:44 ndiri • pindura
Trip ndinokutendai ichi. Nokuti kare vhiki Ndave kutya rufu. Handizivi sei asi ndinoita. I here vaifanira kuyeuchidzwa kuti denga ndicho chakanakisisa chinhu nokusingaperi uye pasi rino haana kuwana chinhu achaita.
vizlyf kuti • Kurume 11, 2014 pa 10:47 ndiri • pindura
Izvi rinotyisa! Thanks fam! You mhuka!
GregBrown • Kurume 11, 2014 pa 11:06 ndiri • pindura
Tatenda ikakuruma iri rokukurudzira! Zviri nyore kuti vamwe tive kupenga kudya utano hwakanaka uye kurovedza muviri. Asi iwe nguva yakawanda kuronga zvokudya zvenyu uye panguva yokurovedza muviri, pane munguva munamato uye kudzidza Shoko? Zviri nyore kuti zvaunokoshesa ndakavhiringidza, kunyange basa munda.
Zvikomborero Kristu kune vose!
Matt • Kurume 11, 2014 pa 1:18 pm • pindura
Ndinobvumirana. Zvokunamata kugwinya / muviri zvikuru kupfuura chero mumuviri kugwinya / maekisesaizi, asi ini DZIMWEWO vanodavira kuti zvose zvinogona kuitwa panguva imwe chete pamwe. Ndinoziva pane wakanaka mutsetse pakati kushanda zvichenjerere, kushanda kunze Mwari, asi pane musiyano (kuzvitenda kana kwete). Kushanda nokuti Mwari, panyama, inosanganisira chinhu yomudzimu. Semuyenzaniso, kana uine Workout naye, iwe taura vaviri nguva nenguva kana iwe Workout pamwe. Fungidzira kana, kana iwe taura maviri, hazvisi pamusoro pombi, tsandanyama dzako, nezvimwewo. pachinzvimbo, paunotaura, taura zvichibva pamwoyo wako, uye kuwadzana umwe muna Kristu. Mumuviri kushanda vangada kuva nevakawanda kufarira vaya vari yokurovedza muviri, asi kana iwe wedzera zvokunamata chinoumba, kugwinya wako vanoenda kuti unearthly pamwero (kurudyi apo tiri kuva), kuparadzira rudo rwaKristu. VaKorose 3:17
Casey • Kurume 11, 2014 pa 1:34 pm • pindura
It zvinoshamisa ini sei Ishe anotaura dzakawanda dzakasiyana. Ndakanga kutorwisana mufungo “Ndinofanira kushanda kubva nhasi” asi akanga achifunga I kukundikana pane nzvimbo iri pamusoro uye pamusoro zvakare uye zvishoma kuzvinzwa unogona kutambisa nguva kana zvisiri chinhu rukuru muupenyu hwangu. Kuverenga Blog uyu chiyeuchidzo naMwari kuti iye>Ini zvino kana ini pfungwa paari uye vanorovedza zvokunamata, Ndinonzwa saka zviri nani zvikuru uye vanovimba kuti hazvina nguva yechando. Ndinofunga kugara mutano kunokosha asi ndinoziva kuti tichichera shoko rake uye vanomutsvaka tashandira zviripo zvose yechipiri muupenyu hwedu. Time naMwari haana kutambisa. Tinotenda kuti kuteerera izvo Kristu akakudana kugovana. Ndaifanira ichi. Mwari akuropafadzei uye mhuri yako Trip!
Trip Lee • Kurume 11, 2014 pa 4:28 pm • pindura
chaizvoizvo, ose chete Wechipiri zviripo. Farai unogona kukurudzirwa!
JB • Kurume 11, 2014 pa 2:00 pm • pindura
Good zvinhu BRO
adonai • Kurume 11, 2014 pa 3:18 pm • pindura
Hey rwendo, ummm Ndiko zvikuru dzinokurudzira byitself
Donnell • Kurume 11, 2014 pa 3:43 pm • pindura
Munhu uyu zvinhu rinotyisa, Ndinoda chii iwe kumiririra. Ndinofarira kudzidza kubva nedzidziso mimhanzi yako zvino bhuku rako “The Life Good”.
Trip Lee • Kurume 11, 2014 pa 4:26 pm • pindura
Farai unogona kukurudzirwa. Uye ndinovimba bhuku rinogona kubatsira kwauri munzira dzakawanda!
MrsRondo • Kurume 11, 2014 pa 4:25 pm • pindura
Izvi zvakanga zvikuru. Zvinhu zviviri Ndinotarisira kuwana uye varambe gore rino asi ini kunditambudza ndiye zvikuru kupfuura vamwe. Thanks Trip, rakakodzera Blogs zvenyu zvave zvinotyisa kwazvo, uye nguva dzose kunongedzera akandidzosera Superstar.
Tee-mukomana • Kurume 11, 2014 pa 5:16 pm • pindura
BRO ndizvo zvandaida. Ndanga kunetseka uye kurwisa mweya yokupedzisira pezvizuva. Just vakakanganwa kunyengetera, verenga bhaibheri rangu, uye kunyange kuenda kuchechi. Uyu Muka kufona. Kubva zvino ndiri achinja muna Kristu. Ini iyeni ndakafunga Mwari achaita N refu achanditeerera nokuda upenyu hwangu vasingadi Mwari. Jesu akafira pamuchinjikwa nokuda kwangu uye ndinoziva ndiri havawanzogamuchiri pamberi uye iye akarurama uye akatendeka kukanganwira ini pazvivi zvangu.
BRO Ndinotenda Mwari kuti upenyu hwako uye zvikuru basa iye ari kuita kuburikidza iwe. Mwari akuropafadzei chokubvuma mabasa ake.
Gara akaropafadza mukoma wangu.
Keinya • Kurume 11, 2014 pa 5:31 pm • pindura
Nongedzera zvakanaka atora! Ndatenda! = iwe)
RobJohnson • Kurume 11, 2014 pa 5:47 pm • pindura
akaropafadza uye kukurudzirwa ichi. Thanks Trip!
Liam • Kurume 12, 2014 pa 12:00 ndiri • pindura
Rwendo mapikicha nguva dzose kusvika kwandiri panguva akakwana nguva. Ramba uchiita Mwari kushanda kuburikidza iwe shamwari yangu
Joshua Galvin • Kurume 12, 2014 pa 2:18 ndiri • pindura
Zvechokwadi aifanira BRO ichi. Tinotenda kuti kurudziro.
Mistry • Kurume 12, 2014 pa 3:28 ndiri • pindura
deeeeep struff Trip, kwete chinhu isu kazhinji nezvazvo. Ndapota, chengeta mapikicha kuuya.
Vicmonyi • Kurume 12, 2014 pa 1:06 pm • pindura
tirsit • Kurume 13, 2014 pa 12:26 pm • pindura
Ichi upenyu hwangu kuti ndiri achichinja pachangu kuna, Mwari Bless Y Trip!!
Clay • Kurume 13, 2014 pa 12:35 pm • pindura
Renee • Kurume 13, 2014 pa 9:54 pm • pindura
Right pane nguva mukoma. Ndatenda! Mwari vakukomborere!
Sophie • Kurume 19, 2014 pa 5:14 pm • pindura
Amen. Ndinokutendai nokutuma shoko iri. Tose tinoda nayo. Praise Mwari.
E_Jay • Kurume 24, 2014 pa 2:09 ndiri • pindura
Mwari akuropafadzei ichi.. Ndinokukumbirai kuwana kurudziro uye kukurudzirwa yur nguva yokushayiwa… Amen
BSN • Kurume 24, 2014 pa 7:13 pm • pindura
Zvinhu zvakanaka. ndima Great.
Solomon • Kurume 26, 2014 pa 6:55 pm • pindura
Tinotenda kuti kutendeka kwenyu kuna Ishe rwendo. Ndinofunga unofanira kunyora bhuku rechipiri.
LoganLong • Kubvumbi 1, 2014 pa 11:45 ndiri • pindura
Ndinofunga izvi zvikuru kushanda Mutsika dzedu nhasi. kakawanda zvakadini kuona vanhu panguva yokurovedza muviri kwemaawa? rwendo, Ndinoshanda panguva YMCA uye ndinoona chete vanhu zuva nezuva kweinenge awa yokushanda kubuda, asi kazhinji kupfuura kuti. Uye anowana muchifunga, Zvichida pane zvakawanda vaKristu kuti apinde kwangu Y (Tisu pakukura Indiana), saka vangani vavo vari kupedza 1-2 maawa zuva kuita vachizvirova basa romudzimu? Izvi kuhupenyu kwandiri nokuti kudaidzwa kunze ndaifanira kudzokera muna chimiro mumuviri nomumudzimu. Mazvita mukoma.
Marjorie • Kubvumbi 2, 2014 pa 12:20 ndiri • pindura
Amen, nemhaka chiyeuchidzo!
Oritsegbemi • Kubvumbi 17, 2014 pa 6:39 ndiri • pindura
Iri ndiro shoko iri nguva! Mwari komborera!
Josh • Kubvumbi 26, 2014 pa 4:38 ndiri • pindura
Iri ndiro shoko-kuti-a-mwaka. In netsika kune vakawanda munzanga Matambudziko kutarisa zvakanaka uye kuti vakomana vave vakakodzera uye 'Buff', tinogona kuti saka mukatadza zvatinofunga tinofanira kufanana, mune chii nevamwe vanotitaurira tinofanira kutarira kufanana.
Achiti Mwari anofunga kuti vanga vaneta dzinotambura anokosha patepi, zvichienzaniswa isingagumi tinogona kupedza naMwari.
Izvi ini nezvokuratidzwa nyaya yaDhavhidhi waanozodzwa nawo mambo Samuel 1 Samuel 16). Mwari anoti mundima 7, “Vanhu kutarisa kunze, asi Jehovha anotarisa pamwoyo.”
MannyRuiz • Chivabvu 17, 2014 pa 2:05 ndiri • pindura
Chaizvoizvo zvinokurudzira Trip! Chinhu anowana ini pedyo naMwari zvechokwadi zvinondifadza ndisimbisei! Saka ndatenda murume. Ndafara chaizvo iwe. Ndinenge rambai iwe :)
Liam • Chikumi 21, 2014 pa 10:27 ndiri • pindura
Trip Ndiri guru kupinda kushanda kunze, asi ndine kuzviyeuchidza kuverenga this post ose neapo. Anobatsira chengeta ini achifunga chii chaizvo
Brian • Chikunguru 4, 2014 pa 9:33 ndiri • pindura
Wow pamwe navo blogger ndinoda zviri ichi. Ndiri Workout Buff asi pava nyore pane dzimwe nguva kuwana nguva tonotora Shoko wangu daily. ipapo Handizivi sei handina kumira kusvika nemiedzo yakaita ndinofanirwa. chiyeuchidzo Awesome. Thanks Trip
gnocchi • Chikunguru 21, 2014 pa 6:22 pm • pindura
Izvi zvinokurudzira chaizvo uye chave chinhu kuti vakambova mupfungwa dzangu. handina kuverenga dzangu zuva nezuva Bhaibheri, saizvozvo, Ndingapinda nokuda 2 kana 3 mazuva pasina kuwana nekuonana neShoko raMwari…asi ikozvino ndinoziva kuti ndiri kuramba pachangu zvikomborero zvisingagumi. Zvinoreva kwazvo kwandiri kuti zvandaiverenga nhasi achandibatsira vhiki rinouya kana mwedzi unotevera. Handikwanisi kuvimba zvandakaita gore rapera, kana svondo rapera…Ndiri kushanda nokuti rangu nokusingaperi!!
Umwari hunokosha pazvinhu zvose vimbiso kune zvose zviripo upenyu uye noupenyu kuuya!
Thanks Trip Lee, yokusairira Mwari basa kuburikidza iwe…Imma kuverenga Shoko zvakawanda! :)
Deborah • Mbudzi 20, 2014 pa 12:26 pm • pindura
Love this post! Ndinoda maekisesaizi & Ndinoda Mwari asi ndinoziva kuti vanokodzera here rangu pakunamata pakutanga yangu.
Ngosa • Kubvumbi 14, 2015 pa 6:33 pm • pindura
kuti akanga zvikuru mashoko Trip, Handina nguva dzose here kana kushanda kunze kwakaipa kana kwete kana kungoti zvisingakoshi. Ongororo Your paachabvisa mhepo pamusoro mumwe. Thanx, chengeta BRAGING BRO!!